Dib u dhigista emaylka ee Muuqaalka > Vielhuber David
Dib u dhigista emaylka ee Muuqaalka05
Emailka asynchronous-ka isgaarsiinta waa - in kasta oo dhammaan waxsii sheegyada masiibada ay ku xeeran tahay Slack iyo Discord - oo ah isgaarsiinta ugu weyn ee qaybta ganacsiga adduunka oo dhan. Marka lagu daro Inbox Zero oo ka socda Merlin Mann, waxaa jira xeelado kale oo badan oo wax looga qabanayo daadadka maalinlaha ah ee emaylka, oo ay ku jiraan waxa loogu yeero e-mailka oo dib u dhacaya, yacni bixinta e-mailada oo daahday.
Haddii aad rabto inaad naftaada iska siiso waqti yar nolol maalmeedkaaga, dib u dhigista otomaatiga ah ee emaylka ayaa lagula talinayaa. Si toos ah ayaad jawaabaha ugu riixaysaa mustaqbalka isla markaasna waxaad si ula kac ah u yareyn kartaa xawaaraha jawaabtaada shaqsiyeed. Shaqadu sidoo kale waxay xaqiijineysaa in e-mailada si lama filaan ah loogu diro macaamiisha ama maamulaha wali dib loo heli karo muddo cayiman.
Mashruucan, waxaan ku soo bandhigayaa saddex nooc oo ah sida aad u hirgelin karto waxaad rabto. Kala duwanaanta koowaad, waxaan abuureynaa aragti Muuqaal ah (marka laga hadlayo Sarrifka server-side) (dhammaan xisaabaadka e-mailka ee la isticmaalay):
Nidaamkani wuxuu daahiyaa dhammaan farriimaha baxa. Nasiib darro keliya qiyaasta qiimaha ee ah 1-120 daqiiqadood ayaa suurtagal ah waqtigaas, si aan e-mailka dib loogu dhigi karin wax ka badan 2 saacadood.
Haddii aad rabto inaad waqtiga dheereyso oo aad sidoo kale xakamayso, waxaad u isticmaali kartaa ballaadhinta Muuqaalka adoo wata qoraal shaqsiyeed VBA ah . Si tan loo sameeyo, furo tafaftiraha makro (ALT + F11), u gudub moduleka "ThisOutlookSession" oo geli mid ka mid ah qoraallada soo socda (isbeddelada sidoo kale waa kuwo firfircoon iyadoon la badbaadin cad oo aan dib loo bilaabin Muuqaalka):
Tusaalahan, emayllada oo dhan waxaa si otomaatig ah loo keenaa 6:00 pm.:
Tusaale ahaan, haddii aad rabto inaad dib u dhigto waqtiga dirista emayl kasta 8 saacadood, qoraalka soo socda ayaa sameeya:
Hadana haddii aad rabto inaad dirto emayl kasta inta lagu jiro waqtiyada Masiixiyiinta subaxa maalinta xigta ee shaqada, waxaad isticmaali kartaa waxyaabaha soo socda:
Haddii aad rabto in lagu weydiiyo dib u dhaca ka hor intaadan dirin, sidoo kale waxaad soo bandhigi kartaa wada hadal kahor intaadan dirin, taas oo lagu weydiin doono inaad rabto inaad dib u dhigto iyo in kale. Sidoo kale waxtar leh: guji "Jooji" wuxuu joojiyaa dirista emaylka xilligii ugu dambeeyay.
E-mailada horay loo daahiyay waxay si toos ah ugu dhacayaan sanduuqa koontada e-mailka ee laga soo diray illaa laga soo dirayo. Muhiim: Waxaa la diraa oo keliya marka Muuqaalka uu furan yahay. Haddii aad rabto inaad tan ka saarto halkaas xaalado aan caadi ahayn, waxaad dib ugu celinaysaa emaylka qoraallada, ka jooji calaamadda "Dib u dhigista illaa" guryaha emailka adoo adeegsanaya Xulashada> Dib u dhigista oo dib u dir mar kale.
Markaa in dhammaan qoraallada kor ku xusan ee VBA ay shaqeeyaan, lambarka ku jira "ThisOutlookSession" waxaa loo sameeyaa qaab VBA gaar ah, oo dijitaal ah. Si aad u tijaabiso shaqooyinka xilligan, waxaad u oggolaan kartaa dhammaan macros (doorbidayaa kaliya si kooban) hoosta Settings> Xarunta Amaanada> Nidaamka Xarunta Aaminaadda ...> Macro Settings:
Haddii aad rabto inaad isku darsato faa'iidooyinka noocyada ugu horreeya (dirista server-ka) iyo kan labaadna (xulashada waqtiga firaaqada ah), Boomerang ee Muuqaalka iyo adeegga "Mar dambe dir" ayaa lagu talinayaa. Adeegani wuxuu bixiyaa dib u dhigista 10 e-mayl bil kasta bilaash wuxuuna u shaqeeyaa si lagu kalsoonaan karo.